Ubumfihlo: Khulisa Ukuthengisa Kwakho Kwesitolo Esiku-inthanethi Ngaleli Platform Ephelele Yokumaketha Kwe-Ecommerce | Martech Zone
Ukuba nenkundla yokumaketha eyenziwe kahle futhi ezenzakalelayo kuyisici esibalulekile sazo zonke iziza ze-e-commerce. Kunezinyathelo eziyisi-6 ezibalulekile okufanele zisetshenziswe yinoma yiliphi isu lokumaketha nge-e-commerce maqondana nemiyalezo:
Khulisa Uhlu Lwakho - Ukwengeza isaphulelo sokwamukela, ama-spin-to-win, ukuphuma, kanye nemikhankaso yenhloso yokuphuma ukuze ukhulise uhlu lwakho futhi unikeze okunikezwayo okuphoqayo kubalulekile ekukhuliseni abathintwayo bakho.
Imikhankaso - Ukuthumela ama-imeyili okwamukela, izincwadi zezindaba eziqhubekayo, izinhlinzeko zesizini, nokusakaza imibhalo ukukhuthaza okunikezwayo nemikhiqizo emisha kubalulekile.
Ukuguqulwa - Ukuvimbela isivakashi ukuthi sihambe nomkhiqizo enqoleni ngokunikeza isaphulelo kuyindlela enhle yokwandisa amazinga okuguqulwa.
Ukulahlwa kwenqola - Ukukhumbuza izivakashi ukuthi zinemikhiqizo enqoleni kuyadingeka futhi, mhlawumbe, kunokusebenza okuhle kakhulu kwanoma yiliphi iqhinga lokumaketha elizenzakalelayo.
Imikhankaso yokudayisa – Ukuncoma imikhiqizo efanayo kuyindlela enhle yokwenyusa inani lenqola yesivakashi sakho futhi uqhubekisele phambili ukuthengisa okwengeziwe.
Izipesheli Zebha Ephezulu - Ukuba nebha yokuzulazula ephezulu kusayithi lakho ekhuthaza ukuthengiswa kwakamuva, ukunikezwa, noma isincomo somkhiqizo kushayela ukuzibandakanya nokuguqulwa.
I-Winback yekhasimende – Uma ikhasimende selithenge kuwe, manje selinokulindela osekumisiwe, futhi ukulenza lithenge futhi kulula. Isikhumbuzi esibambezele isikhathi noma umtitilizo uzoqhuba ukuguqulwa.
Thenga Ukulandelela - Ukubuyekezwa kubalulekile kuwo wonke amasayithi e-e-commerce, ngakho-ke ukuba ne-imeyili yokulandelela ecela isibuyekezo, iphakamisa imikhiqizo, noma nje ithi ukubonga kuyindlela enhle yokugcina amakhasimende akho ebandakanyeka.
Izibonisi - Izifanekiso eziqinisekisiwe ezaziwa ngokuvula ukuvula, ukuchofoza, kanye nokuguqulwa kuyadingeka ukuze abakhangisi bangadingi ukucwaninga noma ukuthuthukisa ezabo.
I-Privy Ecommerce Marketing Platform
I-Privy inikeza ngayinye yalezi zici ukuhlinzeka ngenkundla yokumaketha ye-e-commerce ephelele yakho Thenga esitolo.
I-Privy iyinkundla ebuyekezwe kakhulu ku Thenga Isitolo sohlelo lokusebenza… sinezitolo ezingaphezu kuka-600,000 ezisebenzisa inkundla yazo! Abagcini nje ngokuba nenkundla eyodwa ethengeka kakhulu, i-Privy futhi ineqoqo elibanzi lezinsiza eziku-inthanethi ukuze ufunde ukuthi ungamaketha kanjani isitolo sakho esiku-inthanethi kangcono.
Ngisho noma ungabhalisiwe, ngingancoma kakhulu ukuthi ubhalise futhi uthole i-Privy Ikhalenda Leholide Le-Ecommerce. Ikhalenda ongayilanda, uliphrinte, futhi uligcine likhona… linendawo yamanothi. Bazokuthumelela i-imeyili nezikhumbuzi ezikhuthazayo nezanyanga zonke ukuze ungaphuthelwa elinye iholide.
Zama i-Privy Mahhala
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo ze I-Privy futhi Thenga kulesi sihloko.
Tags: Ukuthengaukulahlwa kwenqolaimikhankaso yokudayisai-winback yekhasimendeimikhankaso ye-ecommerceimeyili ye-ecommerceizifanekiso ze-imeyili ze-ecommerceukubuyekezwa kwe-ecommercei-imeyili ezenzakalelayoimeyili Marketingizifanekiso ze-imeylikhulisa ukuguqulwauhlu lokukhulaukuthengwa kwe-inthanethiimikhankaso yokuthenga nge-inthanethiukuthandaizincomo zomkhiqizoukuthenga ukulandelathengaI-Shopify PlusSMSspin-to-winukutholwa kobhalisileibha ephezuluibha yokuzulazula ephezulu